ညီမလေးတို့ လတိုင်းမနာကျင်စေဖို့ ဆေးမဟုတ်တဲ့ဆေးနည်းများ In:Kawi Inspires, Life Hacks
အရင်ကြိုက်ကြမလား၊ အရင် date ကြမလား??? In:Kawi Inspires, Life Hacks
သင် ၀န်ထမ်းကောင်းဖြစ်ကြောင်း သင့်အလုပ်ရှင်ကဖော်ပြတတ်တဲ့ အချက်(၉)ချက် In:Kawi Inspires, Life Hacks
၁၈ နှစ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် မရပ်တည်နိုင်သေးတဲ့ လူငယ်တွေ In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires, Life Hacks
ကျွန်တော်တို့ relationship တစ်ခုကို “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ စတင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုလို မြန်ဆန်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်ဆိုတာတွေလည်း ရှိနေတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပြောထွက်ကြတယ်။ ဒီလို တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သေချာမသိသေးဘဲ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှုမရှိသေးဘဲနဲ့ relationship ဆိုတဲ့အရာထဲကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရောက်သွားပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ပြန်ထွက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက relationship တစ်ခုရဲ့အစကို “ချစ်တယ်” ဆိုတာနဲ့စတင်နေကြလို့ပါ။ အဲဒီအစား “dating” ဆိုတာလေးနဲ့ စတင်ကြည့်ပါ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံး မပြောခင် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိအောင်၊ ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ရဲ့လား၊ ကိုယ့်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဟုတ်ရဲ့လား၊ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိခဲ့ရင်ရော တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတာ သိရအောင်လို့ အရင် date ကြည့်ကြပါ။ Dating ဆိုတာ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မဆန်းတော့တဲ့ ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံမှာတော့ အရမ်းကို မရင်းနှီးသေးတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုလို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ “dating” နဲ့ “being inarelationship” ကို မကွဲပြားသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါသေးတယ်။ “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို ပိုပြီးလေးနက်မှုရှိသွားအောင် dating လေးတွေက ပြောင်းလဲပေးနိုင်သလို၊ ကိုယ့်အတွက် အဆင်မပြေနိုင်လောက်တဲ့ relationship တစ်ခုထဲကို ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရောက်မသွားစေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၁။ Dating ဆိုတာဘာလဲ??? လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်မင်ဖို့အတွက် ရင်းနှီးမှုဆိုတဲ့ တံတားတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လေ။ ဒါတောင် သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိနေဦးမယ်ထင်တယ်။ ဒီထက် အဆင့်တက်ဖိို့ုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အများကြီး သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ Dating ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေ့လာတဲ့ အချိန်လေးလို့ပြောလည်းရပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပြင်မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိန်းတွေ့ကြတာလေးပေါ့။ ဒီလို Dating လုပ်နေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ အဆင်ပြေသွားကြတာတွေလည်းရှိသလို အဆင်မပြေလို့ နားလည်မှုတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ၂။ ဘာကြောင့် Date လုပ်သင့်လဲ ? ဒီမှာက ရည်းစားတွေဖြစ်ဖို့အတွက် “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့အဖြေကို အရင်တောင်းတတ်ကြတယ်။ Dating မှာချစ်ခြင်း မချစ်ခြင်းတွေ မရှိဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်း စည်း၊ ဘောင်တွေနဲ့ မခတ်ထားဘူး။ မနာလိုခြင်း သဝန်တိုခြင်းတွေ မပါ၀င်ဘဲ တစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ကိုတစ်ယောက်က အလေးထားတဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ Dating လုပ်တာကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာတဲ့အခါမှာ Relationship ဆိုုတဲ့ အဆင့်ကိုတက်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ဘက်မှာခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေရှိလာပြီလေ။ ၃။ Dating နဲ့ Relationship ကွာခြားချက်… Dating ကရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မုန့်စားရင်းစကားလေးပြော ရုပ်ရှင်အတူကြည့် coffee လေးသောက်ရင်းကိုယ့်အကြောင်း၊ သူ့အကြောင်း share ဒီလိုလေးပါပဲ… အရင် Date ဖြစ်တော့ သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ့်အကြိုက်၊ နေပုံထိုင်ပုံ ကိုယ်သူနဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက်နားလည်ပေးနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ အဆင်ပြေမလဲ၊ လက်တွဲနိုင်မလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရတာပေါ့။ Dating မှာ no serious matter included ပါ။ အကယ်လို့ အဆင်မပြေခဲ့ ကြဘူးဆိုရင်လည်း ဒီ Dating လုပ်နေရင်းနဲ့မှ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ Relationship ကတော့ ဒီထက်ပိုလေးနက်တာပေါ့နော်။ Relationship တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ No Cheating မဖောက်ပြန်တာတွေ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသင့်တာတွေ၊ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် Respect လေးတွေရှိသင့်တာတွေ အဲ့လိုလေးတွေနဲ့ ၊ ရင်းနှီးမှုကတော့ ပြောနေစရာလိုမယ် မထင်တော့ပါဘူးနော်… ၄။ Dating လုပ်ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ? အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်း Dating မှာအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်တော့ being inaRelationship ကပိုပြီးတော့တောင် ပျော်စရာကောင်းနေမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အားနာမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ Partner တစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ကံကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒီတစ်ယောက်နဲ့လည်း အဆင်မပြေ နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြိုက်် အဆင်မပြေ ထပ်ပြတ်နဲ့ ဆို ကိုယ်လည်းစိတ်ညစ်နေရမယ်။ အကယ်လို့ သံယောဇဉ်တွေကြောင့် ရေရှည်လက်တွဲသွားကြမယ် ဆိုရင်တောင် စိတ်တူကိုယ်တူ မဟုတ်တဲ့အတွက် ထင်သလောက်အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Dating လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကိုယ့်အကြောင်းကို ပိုသိလာမယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ သင့်တော်လဲဆိုတာလည်းပိုသိလာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းပိုနားလည်လာတာပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်ညစ်နေရမယ့် relationship တစ်ခုထဲကို ဝင်ရောက်သွားမယ့်အခြေအနေကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီး လက်ခံလိုက်ပြီးမှ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ relationship ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလို ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေလားဆိုတာကို date မှာလေ့လာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။ ဒီလို မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်မတိုးဘဲ နေလိုက်ရုံပေါ့။(ဥပမာ – သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ပဲ ရှေ့ဆက်ရုံပေါ့) ဒီလောက်ဆိုရင် Dating က ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? ဘာလို့ Dating ကို အရင်လုပ်သင့်သလဲ? ဆိုတာပိုပြီးသဘောပေါက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိနေရင် `Hey, I Love You´ လို့တန်းပြောမယ့်အစား `Hey, let’s date!´ ဆိုပြီး Intro လေးအရင်ပြောကြတာ ပိုမကောင်းဘူးလား??? -Bee- ...
(၁၈) နှစ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Legal Age ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ မိဘတွေက သူတို့သားသမီးတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ လွှတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်လို့ ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ High School ပြီးလို့ college သွားတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့၊ ပြဿနာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ ၀င်ငွေအနည်းအများထက် အတွေ့အကြုံတွေကနေ သင်ယူတတ်အောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်တယ်လို့လည်း ဆိုလို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ သင်ယူမှုကို စာတွေ့ဘဝကနေ လက်တွေ့ဘဝထဲကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေအတွက်တော့ (၁၈) နှစ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ စတင်ကြိုးစားနေသူတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းရှားနေပါသေးတယ်။ ဒါက လူငယ်တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်သလို ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ခွင့်မပေးတတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့အပြစ်ကြီးပဲလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒီလိုရပ်တည်ဖို့ မလွယ်ကူသေးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းအရင်းတွေလည်း??? ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်နိုင်မလဲ??? ၁။ Part-time ဘာလို့မလုပ်ကြတာလဲ ? သူများနိုင်ငံတွေမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဆိုရင် အများကြီးရှိပြီး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအလုပ်တွေနဲ့တင် ရပ်တည်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာကတော့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လို့ပြောရင်အရမ်းကို ရွေးချယ်မှုနည်းနေပါသေးတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ အလုံအလောက်မရှိတဲ့ပြဿနာ၊ ၀င်ငွေနည်းလွန်းတဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေနဲ့ အချိန်ပိုင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး သင့်လျော်မှုမရှိတဲ့ အလုပ်တွေကြောင့် အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ဖို့အတွက်ဆို အရမ်းစဉ်းစားလာကြတာ မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အချိန်ပိုင်းအလုပ် ဆိုတာထက် လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ content ရေးတာ၊ video edit လုပ်တာ၊ freelance လုပ်တာ စတာတွေနဲ့ စတင်လို့ရပါတယ်။ ရပ်တည်ဖို့မလွယ်ကူပေမယ့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတော့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ အတွေ့အကြုံလည်း ရမှာပါ။ ၂။ ကိုယ့်အတွက် လုံခြုံမှု၊ အာမခံမှု မရှိတဲ့အတွက်… (၁၈) နှစ်လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံမှုအပေါ်မူတည်ပြီး မိဘတွေကလည်းစိ်တ်ချနိုင်အောင်၊ လူငယ်တွေကလည်း စိတ်အေးလက်အေး သွားလာနိုင်အောင်ဖြစ်ဖို့ကလည်း အများကြီးအရေးပါပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံမှု အပြည့်အဝမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ (၁၈) နှစ်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာတော့ မိဘတွေကလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ လိုက်လျောပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒါကိုပြောင်းလဲပေးလို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်၊ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့အလုပ်တွေကို မလုပ်ဘူး ဆိုတာကို မိဘတွေယုံကြည်လာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း တကယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့၊ အစစအရာရာ သတိထားတတ်ဖို့ပါ။ ၃။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ စိုးရိမ်မှု … မိရိုးဖလာထုံးစံအတိုင်း မိဘတွေက သားသမီးတွေကိုစိုးရိမ်တတ်တာကတော့ ထုံးစံတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ စိုးရိမ်ပြီး ဘာမှပေးမလုပ်ဘဲ လက်မွှေးမီးမလောင်၊ ခြေမွှေးမီးမလောင်ထားထားလို့ နေသားကျပြီးမှီခိုတတ်သွားတဲ့ လူငယ်တွေလည်းရှိသလို အဲဒီကြားထဲကမှ ရုန်းထွက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ တချို့အရာတွေက ဆုံးမမှရမယ်ဆိုတာထက် လက်တွေ့အပြင်ဘဝက သင်ကြားပေးလိုက်တာက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ မိဘတွေက ဒီလိုစိုးရိမ်ကြတဲ့အခါ ရုန်းထွက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ အထင်မှားနေတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ် “လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ တိုက်ယူရတာတဲ့”။ ဟုတ်ပါတယ် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ တို်က်ယူရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပုန်ကန်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ့်မိဘတွေက ညဘက်နောက်ကျတာကို မကြိုက်လို့ လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ယူတယ်ဆိုပြီး အရက်သောက် မူးရူး၊ အိမ်ပြန်နောက်ကျ တမင်ပုန်ကန်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တကယ်နောက်ကျတဲ့အခါ ဘာအကြောင်းကြောင့်နောက်ကျတယ်၊ ဘယ်လောက်ထိနောက်ကျမယ်၊ စိတ်မပူပါနဲ့လို့ အသိပေး၊ အိမ်ပြန်နောက်ကျပေမယ့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြန်ပြီး မိဘတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်တာပါ။ ၄။ ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေ မမျှတတဲ့ နေစရိတ်၊ စားစရိတ်… လုံလောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ လိုအပ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ လူငယ်သဘာဝ သုံးစွဲဖို့တွေအတွက် (၁၈) နှစ်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကိုသေချာကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ရရှိတဲ့ ၀င်ငွေ၊ အသုံးစရိတ်တွေက မမျှတတဲ့အခါမှာ ကမောက်ကမတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် (၁၈) နှစ်အရွယ် ၀င်ငွေမရှိသေးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေကို ထိန်းချုပ်တတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေမှားတတ်ကြတာက လိုအပ်တာနဲ့ လိုချင်တာပါ။ လိုအပ်တာကိုဝယ်ပါ။ လိုချင်တာကို မဝယ်ပါနဲ့လို့တော့ ပြောလို့မရပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲလေ လူငယ်တွေရဲ့ လိုချင်တဲ့စိတ်အကြောင်းကို သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လိုချင်တာတွေထဲကမှ လိုအပ်တာကို ပိုဦးစားပေးပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပမာဏကိုအလေးမထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပိုက်ဆံ ၁ သောင်း၊ ၂ သောင်းကို တစ်ပြိုင်တည်း သုံးဖြစ်တာနည်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ၁ ထောင် ၂ ထောင်ဆိုရင်တော့ ၁ ထောင်၊ ၂ ထောင်ပဲလေဆိုပြီး မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ၁၀ ခါလောက် အလွယ်ပဲသုံးပစ်ဖို့ ဝန်မလေးကြပါဘူး။ ဒါတွေကို ထိန်းချုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၅။ ယုံကြည်မှု ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ပါ။ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိသားစုနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြုမူသွန်သင်ပုံပေါ်ကို မှုတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို မခိုင်းရက်၊ မဆူရက်ရာကနေ မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းပြီး လူငယ်တွေကို အတွေးတွေများလာစေပါတယ်။ တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ မဖြစ်သေးတာပဲရှိတာပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှု၊ တစိုက်တမတ် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဇွဲ၊ လုံံံ့လတွေနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ပြီး အရဲစွန့်လုပ်မှသာ နောက်နောင် ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Video လေးတစ်ခုမှာ လူငယ်တွေက ယုံကြည်မှုနည်းတဲ့အကြောင်း၊ စိတ်မရှည်ကြတဲ့အကြောင်းပြောထားတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တာ ၆ လမပြည့်သေးဘူး ထွက်တော့မယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာမှမတိုးတက်လာလို့တဲ့လေ။ သူတို့က အချိန်တိုတိုလေနဲ့ မြင်းမိုရ်တောင်ကို တက်ချင်နေကြတယ်လို့ video လေးထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ပြဿနာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ပြဿနာပါ။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရှည်ဖို့၊ ဇွဲရှိဖို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထက်ကအကြောင်းတွေကြောင့် လူငယ်တချို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေ၊ တီထွင်မှုတွေနဲ့ စိတ်ကူးတွေကို လုပ်ခွင့်မရတာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် မိဘနဲ့နေပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာ၊ ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားလေ့လာသင်ယူပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၁၈) နှစ်အရွယ် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီအရွယ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်မယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ရည် မှန်းချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေဆီကို ဖြေးဖြေးမှန်မှန်သွားတာက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ အပေါ်ကအချက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်မယ့် ပြည့်စုံတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ဘဝကိုရပ်တည်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ တကယ်တမ်း ဘဝကို ရပ်တည်ရမှာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းရပ်တည်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရပ်တည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း တစ်နေ့ရပ်တည်နိုင်အောင် အခုတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ -Bee- ...
အမျိုးသမီးတော်တော်များများအတွက်တော့ လစဉ်ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ ဓမ္မတာကိစ္စဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဝေဒနာခံစားရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက ရာသီလာတဲ့အခါမှာ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာဟာ ဟော်မုန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပရိုစတာဂလန်ဒင် (Prostaglandin) ဆိုတဲ့ အရာကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ပရိုစတာဂလန်ဒင် (Prostaglandin) ဟာ သားအိမ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ ညှစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သားအိမ်တည်ရှိရာ ဗိုက်အောက်ဘက်ပိုင်းက နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနာကျင်မှုဟာ တစ်ခါတလေမှာ ခါးအောက်ပိုင်းနောက်ကျော နဲ့ ပေါင်တွေအထိပါ ပျံ့နှံ့နာကျင်တတ်ပါတယ်။ အချိန်အနေနဲ့ကတော့ ရက်အနည်းငယ်ကနေ တစ်ခါတလေ ရက်ကြာတဲ့အထိ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမျိုးတွေမှာ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို သောက်လေ့ရှိကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေသောက်လို့ နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာသွားနိုင်ပေမယ့် လတိုင်း ဒီလိုနာကျင်မှုဝေဒနာ ခံစားရတိုင်း ဝယ်သောက်နေရတာက ရေရှည်အတွက်ဆို ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရေရှည်မှာအဆင်ပြေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကို သုံးပြီး လစဉ်ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေ သက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ အပူ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းနောက်ကျောတို့ကို ပူနွေးတဲ့အရာတစ်ခုခု ကပ်ပေးခြင်းက ညှစ်ထားတဲ့သားအိမ်ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီးတော့ နာကျင်မှုဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့အရာအနေနဲ့ ရေနွေးဗူး၊ ရေနွေးအိတ် ဒါမှမဟုတ်ေ ရနွေးစိမ်ထားတဲ့ ပုဝါတို့ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့အရာတွေကို သောက်ပေးခြင်းကလည်း အရေပြားဆီကို သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှု ကောင်းစေပြီးတော့ ညှစ်ထားတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေတဲ့အတွက် နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင် ကဖင်းဓာတ်တွေပါတဲ့ သောက်စရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီးတော့ အဲဒီအစား ရေနွေးကြမ်းနွေးနွေးလေးကို သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ဂျင်း ဂျင်းမှာ နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရာသီလာတဲ့အခါမှာ နာကျင်မှုကို အဓိက ဖြစ်စေတဲ့ ပရိုစတာဂလန်ဒင် (Prostaglandin) ဓာတ်တွေကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် ရာသီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကို်က်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပျို့ချင်တာနဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ အီလည်လည်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ကိုယ်စားမယ့်အစားအစာတွေထဲကို ဂျင်းထည့်ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးဆူဆူထဲကို ဂျင်းအဖတ်လေးတွေ ထည့်ပြီး ဂျင်းပြုတ်ရည်လေး လုပ်သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဂျင်းပါတဲ့ သဘာဝဆေးတွေကို သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. အိုမီဂါ ၃ အဆီ (Omega3Fatty Acids) အိုမီဂါ ၃ အဆီတွေဟာ ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရလည်း သွေးထဲမှာ အိုမီဂါ ၃ အဆီဓာတ်လျော့ကျနေခြင်းဟာ ရာသီကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ ရာသီကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ကို်က်ခဲနာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေဖို့ အိုမီဂါ ၃ အဆီဓာတ်ပါတဲ့ အားဆေးတွေကို အနည်းဆုံး နှစ်လလောက် နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးသင့်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. Evening Primrose Oil Evening Primrose Oil ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဆီထဲမှာ ဂမ်မာလင်နိုလန်းနစ် အက်စစ် (Gamma Linolenic Acid GLA) လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တွေ ပေါများကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ GLA ဟာ ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပရိုစတာဂလန်ဒင် (Prostaglandins) ဓာတ်တွေထုတ်လုပ်မှုကို ဟန့်တားပေးတဲ့အတွက် ရာသီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကိုက်ခဲမှုတွေကို အနည်းနဲ့အများ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခေါင်းကို်က်ခြင်းနဲ့ ရင်သားနာကျင်ခြင်းတွေကိုပါ သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ Evening Primrose Oil ပါဝင်တဲ့ အားဆေးတွေကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ရာသီလာချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်းတွေကိုပါ ထိန်းညှိပေးပြီးတော့ စိတ်သက်သာမှုကိုရစေတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ Credit : https://www.simplysupplements.co.uk/healthylife/women-and-health/natural-remedies-for-period-pain ...
ငယ်ငယ်က သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်း၊ ဘော်ဒါအပေါင်းအသင်းတွေကသာ ရည်စားစာရေးခါနီး “ငါမင်းကို အားကိုးပါတယ်ကွာ” ဆိုပြီး ပြောပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကတော့ “မင်းကို အားကိုးပါတယ်ကွာ” ဆိုပြီး ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ အလုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှင်တော်တော်များများကတော့ ထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ့်အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကိုအားကိုးတတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? သူ့ရဲ့အမူအရာတွေကနေ တစ်ဆင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တိုးတက်လာလား၊ အလုပ်ရှင်အားကိုးရလောက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလားဆိုတာကို သိစေမယ့်နည်းဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ တူမှာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့အားကိုးလာတဲ့အခါ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တော့ ဒီလိုအချက်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ၁) သင့်ဆီ အရင်ဦးဆုံးရောက်လာမယ်။ သူ့ရဲ့အကြံသစ်တွေ၊ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေမှုတွေအားလုံးကို သင်နဲ့ အရင်ဦးဆုံးလာတိုင်ပင်မှာပါ။ ကိစ္စကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖြစ်၊ သေးသေးမွှားမွှားဖြစ်ဖြစ် သင့်ဆီ အရင်ဦးဆုံးရောက်လာမှာပါ။ ဒါဟာ သူ့အတွက် သင့်ရဲ့အမြင်တွေ၊ တွေးခေါ်ပုံတွေက တကယ်ကို အားကိုးရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………………………………… ၂) တာဝန်ယူရမှုတွေ ပိုများလာမယ်။ အရင်တုန်းက project တစ်ခုအတွက် ပစ္စည်းတွေလောက်ပဲ ၀ယ်ပေးရတယ်ဆိုရင် အခုအခါ client တွေနဲ့ပါ စကားပြောရလာတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလိုမျိုးတွေ တစ်စတစ်စ တာဝန်တွေပိုယူလာရတယ်ဆိုတာ သင့်ကို ပိုယုံကြည်လာတယ်၊ အားကိုးချင်စရာကောင်းလောက်အောင် သင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေ တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ………………………………………………………………………………………………… ၃) တခြားသူတွေကို သင့်ဆီက သင်ယူဖို့ပြောလာမယ်။ ရာထူးတူတဲ့သူအချင်းချင်းကိုတောင် သူတို့နားမလည်တာ၊ မတတ်တာတွေကို သင့်ဆီမှာ လေ့လာသင်ယူဖို့ ပြောလာမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အရည်အချင်းဟာ စံပြဖြစ်လောက်အောင် အားကိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။ ……………………………………………………………………………………………….. ၄) အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို သင့်ကိုလုပ်ခိုင်းမယ်။ “ဒီကိစ္စက အရေးကြီးတယ် မင်းတာဝန်ယူလိုက်” ဆိုရင် အသေအချာပါပဲ သင်က သင့်အလုပ်ရှင် သဘောကျရတဲ့သူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ………………………………………………………………………………………………… ၅) သင့်ကို ပိုဂရုစိုက်လာမယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့သာမကဘဲ သင်ပျော်နေလား၊ စိတ်ညစ်နေလား၊ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေပြေရှိရဲ့လား၊ အလုပ်ထွက်နိုင်ချေရှိနေလား အစရှိတာတွေကိုပါ ဂရုတစိုက် လိုက်မေးနေတတ်ပြီဆိုရင် သင့်ကို သူ့လုပ်ငန်းမှာ မရှိမဖြစ်ကို အားထားနေရလို့ပါ။ ………………………………………………………………………………………………… ၆) ပိုခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်လာရမယ်။ တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်တွေ၊ ပိုခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကို သင့်ကို ဦးဆောင်တာဝန်ပေးလာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ သင်သာမန်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ခိုင်းဖို့အတွက် သင့်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာ ပြနေတာပါ။ ………………………………………………………………………………………………… ၇) သူတို့က သင့်ကို ချီးမွမ်းစကားတွေအမြဲ လိုလိုလားလားပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က သင်အမြဲကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ဘယ်ကိစ္စမဆို သင်ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ချီးမွမ်းစကားကို သက်သက်ကြီးလာပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ………………………………………………………………………………………………… ၈) လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပမှာတောင် သင့်ကို လေးစားသမှုပြပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတင်မကဘဲ အပြင်အလုပ်ချိန်မှာတောင် သင့်ကို တစ်မျိုးတစ်မည်ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အထင်ကြီးစရာ အရည်အချင်းတွေကြောင့် လုပ်ယူဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘဲ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံနေမှာပါပဲ။ ………………………………………………………………………………………………… ၉) သင့်ရဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်တွေကို ဂရုတစိုက်မေးတတ်လာတယ်။ သူ့အကျိုးအတွက်သာမဟုတ်ဘဲနဲ့ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အနာဂတ်ရေရှည်အစီအစဉ်တွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီပေးလာတယ်။ ဥပမာ workshop တွေဘာတွေတက်ခိုင်းတာမျိုး၊ seminar တွေ၊ သင်တန်းတွေ ညွှန်ပေးတာမျိုးတို့ပေါ့။ ဒါတွေက သင့်ကို သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်က ယုံကြည်စိတ်ချပြီး အားကိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြနေတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ သင့်မှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင်ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ ဒီအချက်တွေမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမှာက သင့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Refence Link – https://www.theladders.com/career-advice/12-signs-your-boss-is-impressed-with-you-even-if-it-doesnt-seem-like-it ...